Mihazakazaka mangotraka anao ny Anass Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Mihazakazaka mangotraka anao ny Anass
Navoaka tamin'ny Jul 30, 2013 ao ankapobeny, Case Anass | 14 hevitra
Nitatitra ny Broadcasting West androany araka ny AD fa ny Anass case vita. Tsy hisy fikarohana fanampiny. Eny, nalaina haingana be ny vaovao, satria ao amin'ny tranokala Broadcasting West Tsy hitako intsony. Ny fahatanterahan'ity vaovao ity dia tonga lafatra. Ny faritra rehetra any Holandy dia miatrika fialantsasatra. Ka dia tsy hisy olona hifoha. Tahaka ny nampanantenain'ny Burgomaster an'i Wassenaar talohan'ny nilazana fa hisy ny hazava kokoa raha vao vita ny fidirana. Tsy nitranga izany. Farafaharatsiny ... tsara, fantatrao, tsy handany teny mihitsy koa aho. Efa lasa any amin'ny fisaonana ny raharaha.
Mahaliana ny mahafantatra fa ny tenako tamin'ny 20 Atoa tao an-dalambe dia nanenjika ny renin'i Anass ilay lahatsary avy amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny tranokalako sy YouTube.
Toa tsara ny fotoana rehetra. Ary tsara ihany koa ny Sampan-draharahan'ny Fampanoavana sy ny politikam-panesorana azy. Nisy ny plottera naharitra izay tsy maintsy nesorina, anisan'izany ilay nitatitra ny NFI, saingy nosoniavina tsy misy dikany ny anarany ao amin'ny Main Stream Media, mba hisorohana ireo mpitsidika ho voasintona amin'ny tranonkalany. Tsy nahomby tanteraka izany, saingy izany dia kolontsaina. Ny 'Anass'Azo lazaina ho fahombiazana ihany koa.
Raha manontany tena ianao hoe inona ny sarin'ny Machiavelli Ity lahatsoratra ity dia misy ifandraisan'ity lohahevitra ity, avy eo dia manoro anao aho mba hiditra ato amin'ity olona ity indray mandeha. Matetika aho no nanonona ny anaran'ity tranonkala ity. Misy loka iray antsoina hoe ity lehilahy ity. Nahazo izany avy tamin'ny renin'i Anass aho Machiavelli lalao fa nandritra ny fitsidihako voalohany azy dia nalaza teo ambonin'ny tampon-tsoroka. Araka ny filazany, i Anass dia nandray io lalao io tamin'ny olona iray. Mbola nody izy. Tsy nahazo valiny velively aho hoe iza no ho avy ity lalao ity. Na izany aza, dia nomena azy sy ny zanany vavy io lalao io. Tsy mbola nitatitra an'io zava-nitranga mahatalanjona io mihitsy aho talohan'io, fa nihevitra aho fa fotoana izao hanononana azy io izao. Nahoana i Machiavelli no miseho any amin'ny toerana misy antsika any amin'ny toerana misy antsika? Ary nahoana no io fanomezana miavaka io ho ahy?
pparty5 / Jolay 31, 2013
Hey martin izao dia efa napetraka amin'ny rafitra havanana ao amin'ity firenena ity izay inona no azonao atao? satria ny zavatra rehetra halehanao dia ratsy raha tsy fantatro ny fifandraisan'izy ireo dia toy ny hoe manana fahafahana milalao izy ireo
Mamono rehefa tadiaviny ary tsy misy olona afaka manao zavatra
donquijotte / Jolay 31, 2013
Tsy misy idirana amin'ny right or left pparty5. Tsara ny rafitra. Ny rafitra KUNNEN dia afaka mifidy eo amin'ny Pepsi sy Coca, Mercedes na BMW, havia na havanana. Izy ireo dia safidy rehetra. Safidy amin'ny endriny hanafenana ny tena rafitry ny fanandevozana.
Anna Tabee Hit (@AnnaTabeeHit) / Jolay 31, 2013
Tsy nijerijery ahy mihitsy aza aho .. Namaky ny app nujij app idd. Na inona na inona nolazainao tany aloha dia hikatona ny raharaha. Ny tena nahavoa ahy dia rehefa niverina aho fotoana vitsy taty aoriana (indraindray aho naniry ny hijery vaovao momba ny vaovao) dia tsy nijanona intsony noho ny vaovao "vaovao" vaovao aho. Noheveriko fa hafahafa izany, satria mbola teo foana ny lahatsoratra navoaka. Noheveriko hoe huh aho ity sa efa tsy nanjavona ity lahatsoratra ity?
Azoko sary an-tsaina fa afaka mandany ny fotoanao amin'ny fomba hafa ianao fa tsy miseho eo anatrehan'ny fitsarana sy ny fiomanana ilaina ao.
Fomba fanao sivily na heloka ve izany? (raha tsy te-hiteny na inona na inona mikasika izany ianao, dia azoko izany) Mahagaga ny mamaky fa mariho fa ny lalao Machiavelli dia nomena ho fanomezana ... ary nomena an'i Anass koa izy ho fanomezana, fa avy eo avy eo? Tohizo izany rehetra izany.
herder01 / Jolay 31, 2013
Tena goavam-be ny zava-misy tsy mifanaraka amin'ny fizarana faha-2 amin'ity taona ity. Nefa koa ny mpitondratenin'ny polisy. Saingy ny ankamaroan'ny Wassenaar dia mahalala fa misy ny betsaka kokoa. Ary ny olon-drehetra dia mitovy amin'ny fomba hafa. Na izany aza, ny mpisolovava izay mahazo vola amin'ny tanany dia TSY MISY, angamba amin'ny mpisolovava.
Martin ianao dia niasa tamina tamim-pahatokisana sy tamim-pahatokiana, afaka mijery ny maso rehetra ianao ary tokony hisaotra anao noho ny zavatra rehetra ny olona.
Ho tolona sy tolona mandritra ny androm-piainana ho an'ireo olona te-hampiray ny madio amin'ny tsy misy izy ireo saingy tsy hahomby raha tsy efa mitondra ny marina, mahaliana isika.
schnijder / Jolay 31, 2013
Tsy azo esorina ny fahamarinana.
Indraindray ny fahamarinana (na ilay fampitahana malaza avy ao amin'ny Baiboly) dia voa nafafy, kely noho ny kely, fa ny hazo goavana kosa dia hitombo avy amin'izany.
Ny tantara dia hanameloka ny lainga, ny mpihazakazaka sy ny mpanakiana miaraka amin'ny lalao toy ny Machiavelli sy ny lalao (noho izany angamba
ny zavatra tokana azon'izy ireo kely).
Raha fintinina, ny ratsy dia manasazy ny tenany.
NB Tahaka izany ilay reny dia feno (bribed, entimidated etc. etc.) avy amin'ny mpamadika / mpivarotra mpitsikera sy mpibitsibitsihina
suzannevdb / Jolay 31, 2013
Vakio ny fahatsiarovan-tenan'i Amanda Knox (miandry mandra-pitenenanao isbn 9789021807737) izay mampiseho mazava tsara hoe firy ny fitsarana no afaka manalavitra ny fahadisoana ataon'ny polisy.
Hitako amin'ny fomba maro toy izao ny raharaha Anass.
Tsy vaovao izany, mazava ho azy fa nentina.
Tena Mazava ho azy fa zava-misy dia tsy marina amin'ny faharoa Uno efa voamarina izany noho ny vehivavy 'ny tafa sy dinika sy ny esters tvwest ny tvwest. Nefa koa ny mpitondratenin'ny polisy.
Saingy ny ankamaroan'ny Wassenaar dia mahalala fa misy ny betsaka kokoa. Ary ny olon-drehetra dia mitovy amin'ny fomba hafa. Na izany aza, ny mpisolovava izay mahazo vola amin'ny tanany dia TSY MISY, angamba amin'ny mpisolovava.
rymavera / Jolay 31, 2013
Mamaky androany aho amin'ny vaovao fa tsy manaiky ny raharahan'ny raharaha ny renin'i Anass ('nikatona') ary te handeha hamono azy amin'ny mpisolovava azy izy.
Ny fotoana farany novakiako momba azy dia nanana mpisolovava avy ao amin'ny biraon'ny Prinsengracht ao The Hague izy. Ny mpisolovava azy amin'izao fotoana izao dia tsy nanoro hevitra azy hamela ny raharaha hitsahatra.
rymavera / Aogositra 2, 2013
Ankoatra ny hafatra teo aloha: http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2013/moeder-anass-start-eigen-onderzoek
panjakana / Aogositra 2, 2013
Martin, manoro hevitra anao aho hamaky ilay boky hoe "Fotopampianarana sy Fomban'ny Hazo Mirehitra" nataon'i Elifhas Levi.
Mba hahatakarana ny olana goavana eto an-tany sy eto an-toerana, dia ilaina ny mahafantatra ny fombafomba sy ny môdika avy amin'ireo taonjato teo aloha, mety hiantso hafahafa kely fotsiny fa mifamatotra izany.
Efa namaky nandritra ny taona maro aho ary mbola tsy hitako fa fantatrao izany tranga izany, dia hanampy anao hahatakatra zavatra marobe izany.
Nampitandrina anareo aho momba izany nandritra ny fotoana fohy ary toa, taorian 'ny fanamarihana momba ny lalao Machiavelli, dia teo an-joron-dalana havanana aho.
Indray mandeha indray, raha tena maniry mafy ny hioroka mafy amin'ny fomba fijerin'ny Justice, Elite, sns sns ... dia tena mila mamolavola an'io lohahevitra io ianao, raha tsy izany dia tsy ho tonga na oviana na oviana mihitsy ianao.
schnijder / Aogositra 21, 2013
@staatsschopper: Fombafomba, majika ambony, fivavahana, kabary fankahalana, feo Holland, dihy any Angletera, Knoedeln von Deutschland etc etc
All bullshit. Ampiasao fotsiny ny fahatsapanao mahazatra anao: tsy ilaina ny bebe kokoa, eny ny fahatsapana kely sy ny fanentanana ara-tsosialy.
Bram Volkers / Oktobra 16, 2013
@schnijder, aza maika loatra amin'ny fitsaranao. Noho izany dia hamaky io boky io aho. Tsy maintsy fantarinao ny fomba fihevitr'ilay fahavalo sy ny tena antony nanosika azy, afa-tsy ny nanolana ny zaza kely ... Efa mahafantatra an'i Machiavelli izahay.
Ity karazana fananganana ity dia mampiasa "fitaomam-panahy" bebe kokoa.
Tsy momba ny hoe mino na majika ambony na tsia ianao, fa momba ny fiezahana hiara-miasa aminy. Soa ihany fa zavatra iray no ankasitrahantsika.
Ny tsy fahampian-tsaintsika dia ny fiarahan'ny olona tsara. Ny tombony ananantsika dia tsy misy na dia iray amin'ireo lazaina fa mpametaveta elitiora aza.
Midika izany ny lanjany, ny fahatakarana marina. Tsy midika akory ny fianarana, ny fahadiovana ary ny fahalalana. Tsy mitovy izany.
Ilaina ihany anefa ny mahafantatra ny antony rehetra, ny asa ary ny fomba fisainana mba hamerenana ny lozam-pifamoivoizana, satria ny tsy fitovian-tsika dia mitoetra ho ny tsy fahampian-tsaintsika, tsy miara-miasa isika.
Ny tranonkala http://www.hetverzet.nl tsy nahombiazana fa miova ny fotoana ....
Mihazakazaka mangotraka anao ny Anass gadoesj - [...] Mandeha mangina manoloana anao ny Anass. [...]
Mpihira mahery fihetsika Ian Watkins, MK Ultra, Anass Aouragh « - [...] Tsy te-hanana izany mihitsy aza aho. Na ahoana na ahoana, manontany tena aho hoe nahoana aho no ...
Ny fijery isan-taona: ny famerenana ny fampielezan-kevitra dia tahaka an'i Anass Wassenaar « - [...] tsy misy na inona na inona natao hanesorana ny fikarohana noho ny antony hafa fa tsy famonoan-tena ary fanentanana taty aoriana ...
Ny alakamisy 6 tamin'ny fihetsiketseha-panoherana ho an'i Hague dia ny fanatsarana ny raharaha Anass « - [...] hanohitra ny fanadihadiana amin'ny 'antony hafa noho ny famonoan-tena' ary fanentanana ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ...
Mpihira mahery fihetsika Ian Watkins, MK Ultra, Anass Aouragh | Martin Vrijland - [...] Tsy te-hanana izany mihitsy aza aho. Na ahoana na ahoana, manontany tena aho hoe nahoana aho no ...
Ny alakamisy 6 tamin'ny fihetsiketseha-panoherana ho an'i Hague tamin'ny fanazavany ny raharaha Anass Martin Vrijland - [...] hanohitra ny fanadihadiana amin'ny 'antony hafa noho ny famonoan-tena' ary fanentanana ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra ...